Wararka Maanta: Arbaco, Dec 23, 2020-Guddiga doorashooyinka Dad ban ee heer federal oo soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare
Warsaxaafadeed kasoo baxay guddiga doorashada ayaa loogu gudbiyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay ugu dambayn 29-ka bishan December soo gudbiyaan liiska murrashixiinta aqalka sare.
Guddigu waxay sheegeen in doorashada xildhibaanada aqalka sare lagu dhameystiridoono inta u dhaxeysa 31 december illaa 6-da January.
Tallaabada xigta waxay tilmaameen in ay noqondoonto diiwaan galinta, xaqiijinta iyo tababarida odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulista ergada doorashada aqalka hoose.
Jadwalka doorashada aqalka sare ayaa dib u dhac uu ku yimid, iyadoo horey loogu heshiiyay in ay billaabato kowda bisha december, hase yeeshee khilaafka siyaasadeed ee doorashada ayaa suurtagalin waayay.
Halkaan hoose ka akriso qoraalka guddiga.